I-Asus ikhupha i-Android 7.0 nougat ye-zenpad 3s 10 (z500m)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo UAsus ukhupha i-Android 7.0 Nougat yeZenPad 3S 10 (Z500M)
UAsus ukhupha i-Android 7.0 Nougat yeZenPad 3S 10 (Z500M)
Siqala iveki ngolunye uhlaziyo lwe-Android Nougat ngesixhobo sika-Asus. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, u-Asus uhambisile uhlaziyo oluninzi lwee-smartphones zalo zeZenFone , kodwa ngeli xesha siza kuthetha malunga nenye yeetafile zenkampani, iZenPad 3S 10.
Ithebhulethi eyaziswa kwihlobo ephelileyo ngoku ilungele i-Android 7.0 Nougat, u-Asus uqinisekisile kutshanje. Uhlaziyo luyafumaneka kwi-Wi-Fi kuphela kwithebhulethi, eyaziwa ngokuba yi-Asus ZenPad 3S 10 (Z500M).
Ngaphandle kokuzisa zonke izinto ezinencindi ebandakanyiweyo kwi-Android 7.0 Nougat, uhlaziyo luthetha ngemicimbi ethile kwaye longeza izinto ezimbalwa ezilungiselelwe ngokukodwa ngu-Asus. Umzekelo, ikhibhodi yeZenUI ngoku inefayile entsha Unicode 9.0 emoji kunye nebala lolusu.
Kwakhona, uAsus wongeze ukutshintshwa kwezaziso ezininzi ukuze xa kufunyenwe izaziso ezininzi zenkqubo enye, banokudityaniswa babe liqela elinye. Imenyu yenkqubo entsha yokuqalisa ngoku iyafumaneka kwabo basebenzisa imowudi elula, emva kokuphucula ukuya kwi-Android Nougat.
Izinto ezimbalwa ziya kususwa kwithebhulethi nakwisoftware, ezinqumlayo zeapps ezinje ngeWood Wizard, Splendid, kunye neNkqubo yokuhlaziya, kunye nePC Suite. Ngapha koko, i I-ZenPad 3S 10 (Z500M) ngoku ibeka iiSeto eziKhawulezayo ngenkxaso yamaphepha amaninzi. Cinezela ikhonkco lomthombo elingezantsi ukuze ufumane uluhlu olupheleleyo lweenguqulelo ezifunyanwa yithebhulethi kunye nokuhlaziywa kwe-Android 7.0 Nougat.
Imisongo yabadala iintsomi ze-android
Ijongeka ngathi i-Android 12 izakuvumela ukuba usebenzise iiSIM ezimbini kwiPixel 4a 5G kunye nePixel 5 ngaphandle kokurhweba
U-Facebook Messenger ufumana useto lweNdlela eMnyama kwi-app ye-Android
Uyenza njani ngokwezifiso i-navbar yeGalaxy Note 8: tshintsha umbala, ulungelelanise amaqhosha, yenze inyamalale!
IWalmart inayo iGoogle 2018 Chromecast, sele siqinisekisa eyona nto ifunwayo